Fitaovana miady amin'ny afo & fitaovam-piarovana ireo mpamokatra sy mpamatsy - China Fire Fighting Equipments & Spare parts Factory
Fantsom-by vy mikitroka fittings fantsom-boaloboka sy tsiro / mpiara / clamp / mekanika tee / milina tee
Anarana henjana sy malefaka Coupling, siko, tee, lakroa, reducer, cap, mekanika tee, cross mekanika, flange adapter Standard ANSI, ASTM, ISO Size 1/2 ″ -12 ″, DN15-DN500 Material Ductile iron QT450 Finish Paint, Epoxy na Galvanisation, Fampiasana Dacromet Fankatoavana FM / UL / CE 1. Rafitra fanaparitahana mandeha ho azy ho fiarovana ny afo amin'ny fananganana ara-barotra, sivily sy monisipaly toy ny famatsian-drano, famatsiana entona, famatsiana hafanana, sns.
Ampiasaina be amin'ny rafitra famafazana mandeha ho azy ho fiarovana ny afo amin'ny fananganana varotra, sivily ary ny tanàna. Toy ny, birao, sekoly, lakozia sy trano fanatobiana entana; Miasa amin'ny hafanana maripana; Karazana vazivazy hisafidianana; Mametraka sy mampiasa mora. Toetra mampiavaka sy fiasa Model FESFR mpanamory afo Varahina, plastika chrome Type mahitsy / pendent / marindrano Sidewall savaivony mahazatra (mm) DN15 na DN20 mampifandray kofehy R1 / 2 ″ na R3 / 4 ″ ...